Mety Havelan’i Jehovah Tsy ho Ampy Sakafo ve ny Kristianina?
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Septambra 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Nahuatl (Afovoany) Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
Midika ve ny tenin’i Davida ao amin’ny Salamo 37:25 sy ny tenin’i Jesosy ao amin’ny Matio 6:33 hoe tsy havelan’i Jehovah ho tsy ampy sakafo mihitsy ny Kristianina?
Hoy i Davida: ‘Mbola tsy nahita olo-marina nafoy tanteraka aho, na nahita ny zanany nangataka hanina.’ Te hilaza zavatra ankapobe izy, vokatry ny zavatra niainany. Fantany tsara fa mikarakara ny mpanompony foana i Jehovah. (Sal. 37:25) Tsy midika anefa ireo teniny ireo hoe tsy nisy na tsy hisy mihitsy ny mpanompon’i Jehovah sahirana.
Na i Davida aza efa nandalo fotoan-tsarotra, ohatra hoe tamin’izy nandositra an’i Saoly. Kely sisa ny vatsy nentiny ka nangataka mofo ho azy sy ho an’ireo niaraka taminy izy. (1 Sam. 21:1-6) Azo lazaina hoe “nangataka hanina” àry izy. Natoky anefa izy fa tsy nahafoy azy i Jehovah tamin’izay. Tsy milaza mihitsy ny Baiboly hoe lasa mpangataka izy.
Nanome toky i Jesosy ao amin’ny Matio 6:33 fa homen’i Jehovah an’izay ilainy ny mpanompony tsy mivadika, raha manao loha laharana an’ilay Fanjakana. Hoy izy: ‘Katsaho foana aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia homena anareo koa izany rehetra izany’, anisan’izany izay hohanina sy hosotroina ary hotafiana. Nilaza koa anefa izy fa hisy fanenjehana ka mety ho noana ireo ‘rahalahiny.’ (Mat. 25:35, 37, 40) Izany no nanjo ny apostoly Paoly. Nisy fotoana izy noana sy nangetaheta.—2 Kor. 11:27.
Milaza i Jehovah fa hiaritra fanenjehana isan-karazany isika. Mety havelan’i Jehovah tsy hanana izay ilaina isika, satria tiany hanampy azy hamaly ny fiampangan’ny Devoly. (Joba 2:3-5) Notandindomin-doza, ohatra, ny Kristianina sasany rehefa nenjehina, anisan’izany ireo tany amin’ny toby fitanan’ny Nazia. Anisan’ny tetika nampiasain’i Satana mba hahatonga ny Vavolombelona hivadika amin’i Jehovah ny tsy fahampian-tsakafo. Tsy nivadika anefa izy ireo fa nankatò an’i Jehovah foana, ka tsy nafoiny. Navelany hiaritra an’izany fitsapana izany izy ireo, toy ny Kristianina rehetra avelany hiatrika fitsapana isan-karazany. Tena ampian’i Jehovah anefa izay rehetra mijaly noho ny anarany. (1 Kor. 10:13) Tadidio foana àry ny Filipianina 1:29 manao hoe: “Ianareo no nomena voninahitra noho ny amin’i Kristy, tsy voninahitra haneho finoana azy ihany, fa hijaly noho ny aminy koa.”
Mampanantena hanampy ny mpanompony i Jehovah. Hoy ny Isaia 54:17: “Tsy hisy hahomby izay fiadiana amboarina hamelezana anao.” Manome toky antsika io andininy io sy ny fampanantenana hafa mitovy aminy, fa ho voaro ny vahoakan’Andriamanitra amin’ny fitambarany. Mety hiharam-pitsapana anefa ny Kristianina tsirairay, ary mety hamoizany ny ainy mihitsy izany.
Fanontanian’ny Mpamaky, Septambra 2014
“Miezaka” Hahazo Andraikitra ve Ianao?
Nahoana Ianao no Resy Lahatra hoe Nahita ny Marina?
Aza Mivadika na Misy “Fahoriana Maro” Aza
Ry Ray Aman-dreny, Karakarao Tsara ny Ondrinareo
Hofoanana ny Fahafatesana, Izay Fahavalo Farany
Aza Hadinoina Ireo Manompo Manontolo Andro
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2014
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2014
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Septambra 2014